Aalad wax u basaasta Imaaraadka oo hawada laga saaray | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Aalad wax u basaasta Imaaraadka oo hawada laga saaray
Qaraal internet-ka ay ku baahisay ayay ku sheegtay in “muddo gaaban aan laga helayn” barnaamijyada App-ka lga soo degsado ee Apple App Store iyo Google Play Store, sababtuna tahay “cillad farsamo”.
Sida uu ku warramay wargeyska The New York Times, DarkMatter waxa uu shaqeeya saraakiil mukhaabaraadka Imiraad-ka ka tirsan, saraakiil hore oo nabad sugidda Maraykana u shaqayn jjiray iyo sarakiil sirdoonka milatariga Israa’iil ka tirsanaan jiray.
ToTok, DarkMatter iyo Safaaradda Imaaraad-ka ee London midkooda noogama soo jawaabin codsi ahaa in ay aan su’aalo ka waydiino.
“In kasta oo dadkii Isticmaalayey ToTok ay sidoodii u heli karaan adeegayaga waxaanu hadana jecelnahay in aad dadka ku cusub u sheegno in aanu la xidhiidhi doono Google iyo Apple si arrinta wax looga qabto” ayaa qoraal ay baahisay ToTok lagu yidhi.
Shirkaddu waxay ballan qaaday in ay “mustaqbalka dhaw” ku soo noqon doonto bogaggaa isadoo soo kordhin doonta qaabab cusub oo ay ka mid yihiin sida lacagta loo bixin karo, wararka, ganacsiga iyo madadaalada.
Qoraalka aqbalaadda adeegsiga ToTok waxa ku jira “in ay dadka xogtooda shakhsiga ah shiraddu u gudbin karto booliska, saraakiisha iyo wakaaladaha la socodka internet-ka ama cidii kale ee sifo sharci ah kaga codsata”.
Waxa sidoo kale uu dhigayaa: “waxaa suurto gal ah in aan xogtaada shakhsiga ah shirkado door ah u gudbino”.
Qoraal shirkaddu baahisay ayey ku faahfaahisay in ay daristay barnaamijka ToTok ee ku jiray iOS oo ay u adeegsatay tilifoon iPhone ah oo “aan la xadidi karin” taas oo macnaheedu yahay in telefoonkaasi barnaamijka uu ku shaqeeyo loo sahlay in aanay xayiri karin barnaamijyada shirkadaha sameeya telefoonadu.
Waxay khubaradoodii jabsadeen barnaamijka ToTok iyo habka barnaamijku “fariimuhu u dhexmaraan”.
Khubradu waxay sheegeen in sharciyadda barnaamijku ay “run ahaantii tahay mid si xariifnimo ah loogu dhisay inuu dadka basaaso”.
Previous articleMooshin ka dhan ah madaxwaynaha Hirshabelle oo Jowhar ka bilowday
Next articleSoomaaliya oo ka qayb gashay shirka ammaanka Badwaynta Hindiya